Any Atsimo : hifarimbonana ny ady amin’ny kere | NewsMada
Hotanterahina ny 19 sy 20 febroary izao any Ambovombe Androy, ny atrikasa lehibe hifarimbonan’ireo minisitera tompon’andraikitra sy ny mpiara-miombon’antoka rehetra handinihana ny vahaolan’ny kere izay mianjady isan-taona amin’ny mponina any atsimon’ny Nosy.
Handrafetana ny drafitrasa sy paikady azo ampiharina avy hatrany hanampiana ny mponina any atsimo no hatao amin’izany. Eo koa ny fijerena ny asa fampandrosoana mifanaraka amin’ny zava-misy iainan’ny mponina any an-toerana.
Mialoha io atrikasa any Androy io anefa, hisy ny atrikasa hataon’ny vaomiera vonjimaikan’ny BNGRC hatao eto Antananarivo ny 11 sy 12 febroary izao. Tanjona ny handinihana sy handrafitra ny paikady maika hamonjena haingana ireo mponina iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo amin’izao fotoana izao.
Raha ny tombana, nambaran’ny BNGRC fa mbola maivana ny tsy fanjarian-tsakafo miseho ankehitriny raha oharina ny tamin’ny taona 2009 sy 2010. Vokatry ny fikorontanan’ny toetr’andro ateraky ny fahasimban’ny tontolo iainana no tena mahatonga ny fikorontanan’ny orana sy ny hatsiaka ary ny hafanana ka miteraka fahavoazana betsaka eo amin’ny famokarana ary mitarika amin’ny tsy fahampian-tsakafo sy ny kere.